कसरी नागरिकता लागि लागू गर्न | आप्रवासी र शरणार्थीका लागि सूचना | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
तपाईं नागरिकता लागि लागू गर्न कसरी सिक्न चाहनुहुन्छ?
तपाईं नागरिकता लागि लागू गर्न कसरी सिक्न अघि, तपाईं पत्ता लगाउन आवश्यक छ: तपाईं एक अमेरिकी नागरिक बन्न योग्य छन्?
तपाईं नागरिकता लागि लागू गर्न कसरी सिक्न अघि, के तपाईं पक्का योग्य हुनुहुन्छ गर्नुपर्छ. नागरिकता लागि लागू गर्न, तपाईं साधारण पूरा गर्नै पर्छ टीउहाँले निम्न आवश्यकताहरू:
तपाईं कम से कम हुनुपर्छ 18 वर्ष पूरानो.
अधिकांश मानिसहरू लागि, तपाईं एक निवासी रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष को लागि संयुक्त राज्य अमेरिका मा बस्ने हुनुपर्छ. तर, यदि आफ्नो पति वा पत्नी एक नागरिक हो, तपाईंले तीन वर्ष पछि लागू गर्न सक्षम हुन सक्छ.
थप पढ्नुहोस् spouses लागि योग्यता
तपाईं विगत तीन महिनाको लागि नै स्थान बस्ने गरेका छन् गर्न आवश्यक.
तपाईं कुनै प्रमुख आपराधिक गतिविधि हुनुपर्छ. एक ट्राफिक टिकट जस्तै सानो अपराध ठीक हो, तर तपाईं कुनै पनि प्रमुख अपराधको को छैन दोषी गर्न सकिन्छ. किनभने सबैभन्दा सानो अपराध ठीक सधैं यस बारे इमानदार तर तपाईंको आवेदन मा झूठ यदि, यो तपाईंको आवेदन अस्वीकार प्राप्त गर्न सक्छन्. तपाईं प्राप्त पनि deported सक्छ. तपाईं एक अपराध को दोषी छन् भने, यो एक वकील कुरा गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ. तिनीहरूले तपाईंलाई के थाहा हुनेछ.
तपाईं अध्ययन र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार सिक्न पर्छ, अर्थव्यवस्था, र इतिहास तपाईं शास्त्र परीक्षा पास गर्न सकून् भनेर.
तपाईं पढ्न सक्षम हुनुपर्छ, लेख्न, बोल्न र अंग्रेजी सुन्न. त्यहाँ असक्षम व्यक्ति वा मान्छे लागि केही अपवाद हुन्छन् 50 जो संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक लामो समय को लागि बस्ने गरेका छन्.
संलग्न डी पुराना पुराना र असक्षम मान्छे वर्ष लागि अपवाद पढ्न
संयुक्त राज्य अमेरिका को सशस्त्र सेवा गर्ने मान्छे नागरिकता लागि लागू गर्न योग्य हुन सक्छ.
बारेमा थप जान्न सेवा मार्फत योग्यता
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट आधिकारिक जानकारी भन्नेछु तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने.
तपाईं नागरिकता लागि लागू गर्न योग्य छन् भने हेर्न कार्यपाना भर्न.
नागरिकता लागि आवेदन धेरै भ्रामक हुन सक्छ. यदि सम्भव छ भने, हामी तपाईंलाई एक वकील मद्दत छ सिफारिस तपाईं.
निःशुल्क र कम लागत कानुनी सहायता पाउन
1. पहिलो चरण फारम पूरा गर्न छ एन-400. के तपाईं पनि शुल्क तिर्न आवेदन धेरै कागजात समावेश गर्न र. यहाँ एक तपाईं आवश्यक कुराहरू लिंक तपाईं आफ्नो N-400 आवेदन मेल गर्दा समावेश गर्न. तपाईं आफ्नो आवेदन दुई पासपोर्ट फोटो समावेश छ. यी फोटाहरू पछाडि आफ्नो "एक-नम्बर" लेख्न सम्झना. तपाईं शुल्क तिर्न छैन त्यसैले केही मानिसहरू शुल्क अधित्याग लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं एक वकील बिना आफ्नो कागजी कार्रवाई भर्न भने, निःशुल्क वेबसाइट CitizenshipWorks.org तपाईंको आवेदन पूरा गर्न मदत गर्नेछ. तिनीहरूले कुनै पनि समस्या छ भने हेर्न यो समीक्षा हुनेछ.
2. तपाईं भन्छन् कि USCIS तपाईंको आवेदन प्राप्त रसिद एक पत्र प्राप्त गर्नेछ. यो राख्न र 13 अंकको रसिद नम्बर लेख्न. को रसिद को फोटो आफ्नो फोनमा बनाउन आफैलाई यो लिनुहोस् र इमेल पक्का यसलाई गुमाउन छैन. तपाईं जाँच गर्न रसिद नम्बर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ को USCIS वेबसाइटमा आफ्नो आवेदन स्थिति.
सामान्यतया लागत नागरिकता लागि आवेदन $725. तपाईं एक शुल्क अधित्याग प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्छ. एक अधित्याग भुक्तानी गर्न हुनेछैन भन्ने हो. यो तपाईं बनाउन कति निर्भर र तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ.
3. आफ्नो बायोमेट्रिक स्क्रिनिङ पूरा. यो एक सुरक्षा जाँच छ. तपाईं एक निश्चित दिन र समय मा एक कार्यालय जान आग्रह गरिने. यो नियुक्ति जाने निश्चित र समय आइपुग्दा गर्न! को नियुक्ति मा, तिनीहरूले आफ्नो औंलाहरु हुनेछ. यो तिनीहरूले आफ्नो औंलाहरु निश्चित गर्न सिस्टम मार्फत तस्वीर टिकट र चालु तपाईंले आपराधिक छैनन् अर्थ.
4. एक संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता र अध्यागमन अधिकारी संग एक साक्षात्कार पूरा. यस बारेमा थप जान्न प्राकृतिक साक्षात्कार.
5. तपाईं पनि अमेरिकी इतिहास र सरकारी एक शास्त्र परीक्षा लिन हुनेछ. यो परीक्षा मा, तपाईं जवाफ हुनुपर्छ6बाहिर 10 अमेरिकी नागरिक शास्त्र बारेमा सही प्रश्न, इतिहास र सरकार. तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो नागरिकता अभ्यास प्रतियोगिता तपाईं परीक्षा लागि तयार छन् भने हेर्न. तपाईं तयार छैनन् भने, तपाईँ सामेल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो निःशुल्क नागरिकता वर्ग तपाईं परीक्षा लागि तयार.
6. तपाईंको आवेदन बारेमा USCIS देखि एक लिखित निर्णय प्राप्त हुनेछ. तपाईं आफ्नो साक्षात्कार को दिन आफ्नो निर्णय प्राप्त हुन सक्छ वा तपाईंलाई मेल पछि प्राप्त हुन सक्छ. तपाईंको आवेदन थियो भने निर्णय भन्न गरिनेछ:
प्रदान (यो जानुभएको अर्थ!)
जारी (यो अर्थ USCIS तपाईं बारेमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ वा यो तपाईं अंग्रेजी वा शास्त्र परीक्षाहरू असफल हुन सक्छ अर्थ. तपाईं फेरि लाग्न सक्छ।)
अस्वीकार (यो अर्थ USCIS तपाईं प्राकृतिक लागि योग्य छैनन् निर्णय. यो हुन्छ भने, तपाईं आवेदन गर्न सक्षम हुन सक्छ।)
तपाईं पारित गरे भने, तपाईं आफ्नो नागरिकता समारोह पूरा निष्ठा को शपथ लिन तयार हुनेछ. यो तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका लोयल्टी कसम अर्थ.
तपाईं प्रक्रियाको बारेमा प्रश्न छ भने, त्यहाँ कल गर्न सक्छन् संगठन हो. केही नव आगन्तुक भाषामा यी संगठन प्रस्ताव सल्लाह.
तपाईं नजिकै मुक्त वा कम लागत नागरिकता मदत पाउन
हामी यो नागरिकता लागि लागू गर्ने बारे आफ्नो प्रश्नको जवाफ मदत आशा. हाम्रो निःशुल्क नागरिकता तयारी कक्षाहरू लिन तल साइन अप. तपाईं अनलाइन तिनीहरूलाई लाग्न सक्छ, कहीं, कुनै पनि समयमा!